Indawo enomtsalane enePhuli, iTavern, kunye neBarbecue
Imrencevo, Regiunea umen, Bulgaria
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSharingXchange
USharingXchange unezimvo eziyi-274 zezinye iindawo.
Yitshise i-BBQ, uqokelele usapho kunye nabahlobo kwithaveni yangaphandle kwaye uzipholele kuxolo kunye nokuzola kwale ndawo izolile kunye nokuphumla. Buyela emva kwexesha kwaye uhlaziye ubungangamsha boBukhosi bokuQala baseBulgaria ngokundwendwela iinqununu zayo, i-Madara Horse Rider kunye nezinye iindawo zembali kule ndawo.
Le ndawo ilala iindwendwe ezi-3 kwaye ibandakanya igumbi lokulala eli-1 elinebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye..
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-274 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Ipropathi ifumaneka kwilali ezolileyo ngaphakathi kweekhilomitha ezili-15 ukusuka eVeliki Preslav, Targovishte ingaphakathi kweekhilomitha ezili-18, iShumen - iikhilomitha ezingama-25. Umgama oya ePliska, inqaba yaseMadara, kunye neMadara Rider ziikhilomitha ezingama-50.
Umbuki zindwendwe ngu- SharingXchange
Umamkeli wakho uya kuba kwipropati ukuze akwamkele kwaye uya kufumaneka kuyo nantoni na oyifunayo.